Sofia H�tel Fianarantsoa Nandalo Ratsiraka, notapahin�ny Jirama ny jirony
Nandravarava i Eliakim olona 7 maty, 10.292 no traboina
Namono olona miisa fito hatramin’ny omaly alahady ilay rivodoza Eliakim nandalo teto amintsika. Anisan’ny nahitana izany ny tany amin’ny Faritra avaratry ny Nosy sy Atsinanana izay tena noravaravan’ity rivodoza ity tokoa.
Tanimboly mirefy 9 hektara eny Ivato Saika nosen’ny miaramila
Andiana miaramila am-polony maro no nanao amboletra namotika volin’olona tetsy Sitabomba (Soute à Bombes) Ivato.
Mpanohana fitondrana Miezaka mafy manangana haino aman-jery
Malalaka ny fanokafana haino aman-jery mpanohana fitondrana fa ny hafa kosa gejaina. Ny MBS, ohatra, dia misy amin’ireo tompon’andraikitra ambony no mamoaka vava fa raha mbola izy ireo no eo dia tsy hisokatra mihitsy.
Fampidirana rano Tsy ampy fitaovana ny JIRAMA
Anisan’ny manahirana sady mampikaikaika ny maro ny mampiditra rano amin’izao fotoana. Afaka manao ny asa fampidiran-drano amin’ny fomba haingana ihany anefa ny JIRAMA raha toa ka afaka mividy ireo fitaovana tsy ampy na tsy misy eo anivon’ny orinasa ny mpanjifa. Atao ity tolotra ity ho an’ireo izay efa nandoa ny faktioran’ny zavatra mety ilaina (dévis) izay nataon’ny JIRAMA.
Toamasina Dibo-drano ny tanàna
Raha ny tatitra voaray dia tena nitondra takaitra ny teo anivon’ireo distrikan’ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana nandalovan’ilay rivodoza Eliakim ny faran’ny herinandro teo.
Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka Nesorina ny sekretera jeneraly
Nirarakopana ny fanesorana tompon’andraikitra ambony tao amin’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka nandritra ny filankevitry ny Minisitra omaly. Isan’ireny ny Sekretera Jeneraly Dr Ratsirarson Joséa, izay efa nisy ny tsaho niparitaka ny fiandohan’ny herinandro, fa nametra-pialana ny tenany, saingy nandisoiny izany. Noterana niala ve izy fa tsy nety?
Bizina volamena eny Analakely Mahavelona tsara, hoy ireo mpanao azy
“izahay mividy volamena ô”, izay le feo tsy maintsy re rehefa mandalo eny Analakely, indrindra ny manamorona ny fianarana Jean Joseph Rabearivelo iny.
Vitsy ny mofo dipaina teny an-tsena, tsy nandeha ny radio sy ny televiziona, maizina tampoka ny hotely sy ny toeram-pisakafoanana.
Nanaitra ny mponina tao Fianarantsoa ireo trangan-javatra niseho tao amin’ny Sofia Hôtel Fianarantsoa tamin’iny herinandro iny. Taorian’ny nandalovan’ny Amiraly Didier Ratsiraka tao amin’ity hotely ity, nankalaza ny tsingerintaona faha-80 nahaterahany sy faha-40 taonan’ny antoko Arema tarihiny, no nitranga ny fanapahan-jiro, hany ka be no nanao fanamarihana hoe : misy ifandraisany tamin’io fandalovan’i Deba io ve io fanapahan’ny Jirama ny jiron’ny Sofia Hôtel io ? Ny zavatra tsapan’ny mponina dia nisy fiantraikany tamin’ny famatsiana mofo dipaina tao Fianarantsoa io jiro tapaka io. Manana milina mpihary herinaratra azy manokana ny hotely saingy tsy mahazaka ireo fitaovana miasa. Zara fa nisy mofo teny an-tsena, tsy naharaka ny filàn’ny mponina ireo mpanao mofo hafa misy ao Fianarantsoa. Nisy nanararaotra an’io tranga io aza ny mpivarotra sasany, ka nampakatra ho 350 Ariary ny vidin’ny mofo dipaina iray, raha 300 Ariary izany isan’andro. Fa ny nanaitra dia maizina tanteraka tao an-toerana ny sabotsy teo. Zara fa nandeha ihany koa ny Radio sy Televiziona Sofia tamin’iny herinandro iny. Orinasa manana ny lazany ao Fianarantsoa ny Sofia Hôtel, ary mampiasa mivantana olona maro ankoatra ireo mpamatsy entana azy. Famonoana ny mpandraharaha raha toa ka antony politika no nanakendana ny orinasa amin’ny fanapahana jiro toy izao, raha antony hafa toy ny faktiora tokony hefaina indray mantsy, dia tokony ho vitan’ny fifampiraharahana izany satria orinasa anisan’ny lehibe ao an-drenivohitr’i Fianarantsoa ny Sofia Hôtel.